एसाइलम प्रतिनिधित्व गर्ने वकिललाई कति शुल्क तिर्ने ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एसाइलम प्रतिनिधित्व गर्ने वकिललाई कति शुल्क तिर्ने ?
अमेरिका । यदि तपाईले तपाईको एसाइलम केस प्रतिनिधित्व गर्ने वकिललाई धेरै रकम तिर्नुभयो भने उसले तपाईको केसमा भन्दा धेरै समय रकम गन्नमा नै लगाउन सक्छ । त्यसैले तपाईको एसाइलम केस प्रतिनिधित्व गर्ने वकिललाई कति रकम तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाई सजग हुन जरुरी छ ।
एउटा रिपोर्ट अनुशार युएससीआईएसमा फाइल गरिने एसाइलमको मुद्दाको प्रतिनिधित्वका लागि वकिलहरुले ९ सय डलरदेखि १० हजार डलरसम्म लिने गरेका छन् । अदालतमा गएको एसाइलम केसको सन्दर्भमा शुल्क अझ धेरै हुनेगर्छ । कतिपय सन्दर्भमा वकिलले लिने शुल्क घण्टाको दरले हुनेगर्छ भने कतिपयले एकमुष्ठ रकम लिएर काम गर्छन् ।
सामान्यतया तपाईले युएससीआईएसमा फाइल गरेको एसाइलम केसका लागि वकिललाई ३ हजार डलर तिर्नुभएको छ भने त्यो औषत र ठिक्क रकम हो । त्यस्तै अदालतमा रहेको एसाइलम केसका लागि तपाईले ४ हजार डलर तिर्नुभएको छ भने पनि त्यो औषत र ठिक्क रकम रहेको जनाइएको छ । किनभने औषतमा वकिलहरुले लिने शुल्क यही हो ।
तर धेरै रकम तिर्दैमा तपाईले राम्रो वकिल लिनुभएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्नुहुन्न । कतिपय वकिलहरु इमान्दार, मिहिनेती र चलाख हुन्छन् भने कतिपय अल्छी, अनुभवहिन र ठग हुन्छन् । एसाइलमको लागि धेरै रकम लिने वकिलहरु कतिपय सन्दर्भमा सहयोग गर्ने भन्दा बढी पैसा कमाउनेतिरमात्र धेरै ध्यान दिने हुन्छन् ।
राम्रो वकिलले तपाईको कथा सुनेर तपाईको केसको कमजोर र बलियो पक्षको मूल्यांकन गर्छ । राम्रो वकिलले तपाईलाई एसाइलमको प्रकृया, हुनसक्ने ढिलाई र सम्भावित परिणामबारे पनि सजग गराउँछ । त्यसैले कसैले मुद्दा जिताइदिने ग्यारेन्टी गर्छ भने त्यस्तो वकिल लिनुहुँदैन ।
शपतपत्र नै मुद्दाको मुटु हो । कानुनी रुपमा कुन कुरा उल्लेख गर्दा केस बलियो हुन्छ भन्ने आवेदकलाई थाहा नहुनसक्छ । यो अवस्थामा तपाईलाई सपथपत्र तयार पार्ने काममा वकिलले समय दिदैन भने त्यो वकिललाई राम्रो मान्न सकिन्न । राम्रो वकिलले तपाईलाई अन्तरवार्ताका लागि पनि तयार पार्छ । यदि तपाईले वकिललाई फोन गरेर सन्देश छाड्दा वकिलले कलब्याक गर्दैन भने त्यो वकिललाई राम्रो मान्न सकिन्न । राम्रो वकिलसँग त्यस्तो सुविधा हुन जरुरी छ ।
राम्रो वकिलले तपाईलाई आफ्नो मुद्दाबारे झुठो बोल्न वा झुठो विवरण बुझाउन उक्साउदैन । आवेदकले अमेरिकी सरकारसमक्ष झुठो बोल्दैछ भन्ने जानकारी दिंदादिदै पनि मुद्दा लिने वकिललाई राम्रो मान्न सकिन्न । त्यसो गर्ने वकिल खतरनाक र विश्वासहिन हुन्छन् ।